Agoosto 30, 2018 - Ellicott Dredges
Source: mlive.com TOOSSHIP, MI - Tani waa xagaagii ugu dambeeyay Wabiga Kalamazoo wuxuu noqon doonaa goob ay ka socoto howlo qoditaan culus, maaddaama shirkadda Enbridge Inc. ay nadiifinayso qashin ka soo baxa dhuumaha daadiyay oo u diray qiyaastii 800,000 oo galaan oo saliid ceyriin ah Talmadge Creek iyo webiga. Ku dhowaad afar sano ka dib tan iyo markii la helay daadinta 26 July, 2010 agagaarka Marshall, shirkadda dhuumaha qaada Canadian ayaa soo gabagabeyneysa nadiifinta. Kormeeraha xaafadda Comstock Ann Nieuwenhuis ayaa sheegtay in shaqadii ay ka qabatay magaaladdeeda bariga Kalamazoo ay ka qabatay meel aad u badan oo ka baxsan aragtida dadweynaha ayna u muuqato iyada oo aan wax dhibaato ah la kulmin “Kasta ...
Qalabka ugu qiimaha-wax ku oolka badan abid gurigaan ayaa la keenay. ” - Mark Shea, Kaaliyaha Kormeeraha Daaweynta Qashinka Riwaayad aan caadi ahayn oo loogu talagalay qulqulka hareeraha, Ellicott Brand Series 370 Dragon "DRAGON®" cutterhead dredge ayaa laga soo saaray afar qalab oo kala duwan oo laga helay laba wershadood oo lagu dejinayo balliyada: dambaska duqsiga, dambaska hoose, lime, iyo liin qasan dambas. Daadku wuxuu u dhaqaaqay in ka badan 100,000 oo mitir cubic saddex bilood gudahood. Magaalada Springfield, Illinois waxay leedahay oo maamushaa Xarunta Biyaha Magaalada & Awoodda (CWLP) Dahlmann Generation Station. Dhuxusha gubanaysa waxay soo saartaa saddex waxyaalood oo qashin ah: dambaska duqsiga, dambaska hoose, iyo nuuradda biyaha ...
Waxaa laga soo xigtey: Waxaa laga soo xigtey Bay Weekly On-Line Daabacaadda Deale waa dekedda ugu weyn Galbeedka Xeebta ee u dhexeysa Annapolis iyo Solomons. Laakiin si ay u gaaraan biyaheeda la ilaaliyo, doonta doontu waa inay dhaafaan Scylla iyo Charybdis. Soojiidashada casriga ah ee wuxuushta Odyssean waxay sababtay doonyo badan. Scylla, dhagaxa weyn, waa mashiinka dhagaxa 900-cagood ee ka ilaaliya dekedda waqooyiga. Haddii aad ka gudubto Scylla, weli waa inaad wax ka qabataa Charybdis. Wareeg ka socda waddankeeda Straits of Messina, Deale's Charybdis waa biyaha xeebta ee Rockhold Creek, kanaalka ku yaal deale deale Scylla si adag ayaa loo xididay, laakiin ...
Isha: Greater Kashmir waxaa qoray Arif Shafi Wani 'Qodista Joogtada ah waxay kordhisay Awoodda Fiditaanka Wabiga' In kabadan 50 sano, calaamadda asalka ah ee Ellicott for ee loo yaqaan 'Jhelum dredge dredge' waxay lashaqeysaa qaab hadda jira. Srinagar, Sep 16: Mashruuc himilo badan leh oo lagu badbaadinayo wabiga noloshiisa ee Kashmir Jhelum ayaa bilaabay inuu soo saaro natiijooyin wax ku ool ah iyadoo dowlada Jammu iyo Kashmir ay ku adkeysanayaan in halista daadadka ee ay sababeen roobabkii ugu dambeeyay ee aan kala go’a laheyn ay hoos u dhacday sababo la xiriira tallaabooyinka ilaalinta wabiga ee waqooyiga Kashmir Jhelum oo ah isha ugu weyn ee waraabinta dooxada ayaa waxaa hareeyay nabaad-guur balaaran dhowrkii ugu dambeeyay ...
Waxaa laga soo xigtey: Sheekada Daboolka Macdanta Qodista & Dhismaha 18 inch (457 mm) Ellicott® brand cutter nuction dredge “Alabama” wuxuu bilaabay howlihii Mashruuca Difaaca Badda ee Keta The Keta Lagoon waa jidh ballaaran oo biyo macaan ah oo laga soocay biyaha cusbada ee Gacanka ee Guinea dhul cidhiidhi ah. Kani waxa uu la kulmayaa nabaad guur ba'an oo joogto ah. Qeyb badan oo ka mid ah kaabayaasha hoyga iyo dadweynaha ee tuulada Keta, oo ay ku jiraan wadada isku xirta deriskeeda waqooyiga, ayaa ku lumay badda. Baaxadda dhulka u dhexeeya Keta iyo Kedzie ayaa ku baaba'aya heer ...
Khadadka Taleefoonkeenu Waa Hoos
Waxaan hadda la kulannaa taleefan la'aan. Macaamiisha u baahan taageero degdeg ah fadlan u soo dir emayllada leh shuruudaha Iibka si sales@dredge.com ama loogu talagalay Adeegga Macmiilka & Qaybaha Dayactirka parts@dredge.com. Waan ka cudur daaraneynaa dhibkaas waxaanan rajeyneynaa inaan kula hadalno goor dhow.